Konke malunga nempahla yee-80s, ubunxibe njani ngelo xesha? | Amadoda aQinisekileyo
Iimpahla ze-80s zisefashini. Kwaye hayi iimpahla kuphela. Kungoku nje singqongwe macala onke yimbeko kunye nokubhekisa kubuhle bee-1980s. Umculo, i-cinema, uthotho, iiklip zevidiyo ... wonke umntu ubonakala evuma kwiminqweno yabo kuloo minyaka, kwanabo babengekazalwa.
Nangona kukho utyekelo lokucinga ukuba iimpahla zee-80s bezikwindlela ethile, kokukhona uya kwixesha, icace gca kunokwenyani zazininzi izitayile. Nangona bonke babenezinto ezimbalwa ezifanayo: imvelaphi kunye nobungqina.
1 Umabonakude uyalela ifashoni
1.1 Isizukulwana seMTV
1.2 Uthotho lwesitayile
3 Impahla yezemidlalo
4 Izizwe ezisezidolophini
5 Iimpahla ezingama-80 kwiindawo zokuhamba
Umabonakude uyalela ifashoni
Ekuqaleni kweminyaka yoo-1980, phantse yonke imizi yayisele inomabonakude.. Impembelelo yakhe kuluntu inkulu kuwo onke amanqanaba, eyalela uninzi lwefashoni kwii-80s ngokusebenzisa iividiyo zomculo kunye nomdlalo kamabonakude.
Kwi-1981 ikhonkco lobuvulindlela i-MTV (iThelevishini yoMculo) yazalwa. Umabonwakude sisimo esifanelekileyo seenkwenkwezi zomculo ezinxiba ezona mpahla zazo zibalaseleyo. Iividiyo zomculo kunye nefashoni ziqala ukukhula zibambene.
UMichael Jackson, uBon Jovi, uDuran Duran noBruce Springsteen Bangabanye babazobi abakhuthaza abantu abatsha xa kufikwa ekubumbeni inkangeleko yabo.
I-hip hop ifanelwe ukukhankanywa okhethekileyo. Ifashoni yolutsha ifumana umthombo ongenakupheliswa wokhuthazo kubazobi bolu hlobo lomculo luhlaziyayo. Oko kuye kwaqhubeka ukwenzeka ukusukela ngoko.
I-Run DMC kunye neBeastie Boys ziphakathi kwezona ndlela zibalulekileyo. Ii-DMC zokubaleka zazinxibe iminqwazi yeFedora, izithinteli zomoya, amatyathanga egolide, kunye neziteki zeAdidas. Kwicala labo, iBeastie Boys yandisa isitayile esixubene nerock, punk kunye neNew York esitratweni.
Uthotho 'Urhwaphilizo eMiami' okanye 'iMiami Vice' (1984-1990) yenze umkhwa ngobukeka bayo obuhle kodwa obuqhelekileyo. UDon Johnson waba luphawu lwesitayile kunye neesuti zakhe ezinombala okhanyayo kunye nebhatyi esongiweyo kunye nesikipa endaweni yehempe..
'I-Dinastia' yenye yeedrama zikamabonwakude zaseMelika ezaziphawula iimpahla zee-80s. Ngexesha apho imali yaqala ukulawula phezu kwayo yonke into, ababukeli bafuna ukubonakala njengabalinganiswa babo abazizityebi nabanamandla.
IiYuppies zizalwe kwiNew York Stock Exchange. Isigama sobuchwephesha kulutsha lwasezidolophini, injongo yakhe bubutyebi kunye nempumelelo yobungcali. Isitayile seyuppy sibonakala ngempahla enonophelo.
Bacinga iisuti zebrendi eziyimfuneko ekwenzeni umfanekiso wendoda ephumeleleyo. Iisuti ezimbalwa ezazisetyenziselwa ilaphu elininzi, zikhokelela blazers kunye neebhulukhwe zibanzi kakhulu kunangoku. Babenxibe ii-suspension, bechebe ngokusondeleyo, iinwele zabo zikamiwe, kwaye bengazange bahlukane neeselfowuni zabo ezinkulu.
'Wall Street' (Oliver Stone, 1987), 'American Psycho' (Mary Harron, 2000) kunye 'The Wolf of Wall Street' (Martin Scorsese, 2013) zezinye ze Iimovie apho iHollywood ibonise ngokuthembekileyo indlela iiuppies ezinxibe ngayo.
Ukuthabathela ingqalelo iimpahla zemidlalo kuzalwe kwii-80s. Kwaye malunga neminyaka elishumi kolu ngcelele 'Udumo' (1982-1987), 'Flashdance' (Adrian Lyne, 1983) kunye nevidiyo ye-aerobics yomlingisi uJane Fonda. Abaqulunqi bama-80s bathatha kwangoko kwiiqoqo zabo ifiva yokunqula umzimba owawukhutshwe kuluntu lwexesha.
Iitracksuits ezinamalaphu aqaqambileyo kunye neeprinta ezitsala amehlo zikwimidakunye nezihlangu zezemidlalo. Kodwa incasa yempahla etofotofo idlula ngaphaya kwezemidlalo, ityhutyha zonke iintlobo zeengubo. Izambatho zasesitratweni zikwafumana ubhetyebhetye kwaye amalaphu ayo ahlukile eluswini ukubonelela ngenkululeko enkulu yokuhamba. Zizemidlalo ezidumileyo.
Ukusukela ngoko, ishishini lezemidlalo liye lakhula kuphela. Ayothusi into yokuba iimpahla zemidlalo, kunye nempahla entofontofo ngokubanzi, zithathwa njengezinjalo phakathi kweyona misebenzi mikhulu yeshumi leminyaka.
Iipunks, i-skinheads, i-rockabilly, i-goths ... Izizwe zasezidolophini zinefuthe elikhulu kwiingubo ze-80s, yiyo loo nto bengenakushiywa ngaphandle.
Iipunks zinxiba izacholo ezinamabhanti kunye neebhanti, ijini ekrazukileyo okanye iblukhwe e-plaid, kunye neebhutsi zomkhosi. Bahlala begqibezela ukujonga i-crests, iitattoos kunye nokubhoboza. Iintloko zolusu, ngokwazo, zibonakaliswa ngokunxiba iipolos, iicardigans, ijean kunye neebhutsi zomkhosi.
Umfanekiso ongekho ngqwabalala yayingulowo uqikelelwe yi-rockabilly. Esi sizwe sasezidolophini sinxiba iibhatyi zesikhumba, ijini, kunye nezihlangu eziphakamileyo, ezineebhutsi ezinde. Ngenxalenye yayo, iigoths zinikezela ngeengubo eziphefumlelwe ngempahla yokulila kunye neenoveli ezenzeka ngelo xesha, njengoko kunjalo 'iDracula', nguBram Stoker.
Iimpahla ezingama-80 kwiindawo zokuhamba
URobert Geller Intwasahlobo 2017
E. Tautz kuwa ngo-2016
I-catwalks igcwele izikhombisi kwiimpahla ezingama-80s. URobert Geller, uGucci no-E. Tautz zezinye zeefemu ezikhethe iiphedi zamagxa kunye neempahla ezikhululekileyo kangangexesha elithile ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Impahla yama-80
Uyenza njani itoupee
Ungawasusa njani amabala egazi ezingubeni